यौनसम्पर्कको क्रममा महिलालाई पीडा किन हुन्छ ? - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
यौनसम्पर्कको क्रममा महिलालाई पीडा किन हुन्छ ?
काठमाडौं । यौन आवश्यकता दुनियाभरका युवायुवतीहरुमा हुने एउटा प्राकृतिक आवश्यकता हो । भिन्नभिन्न पृष्ठभूमिले गर्दा कोही मान्छे यौनमा बढी भोगी हुन्छन् भने कोही यस मामलामा कम इच्छुक हुने गर्छन् । तर यो सबैको लागि अनिवार्य र आवश्यक कुरा हो ।
यौन सम्पर्कको समयमा यसो गर्न रुचाउछन् महिला
लिभिङ टुगेदरमा सम्बन्धको जोखिम
जाडोमा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि यसो गर्नुहोस्
श्रीमान श्रीमतीको खटपटले डिप्रेसन हुन सक्ने
यस्ता छन् यौनसँग सम्बन्धित ८ घतलाग्दा कुरा
महिनावारीयौन जीवनयौन सम्पर्कयौन सम्बन्ध